Talooyinka Ku-habboonaynta Bogga Soo Degidda ee Kordhiya Qiimaha Is-beddelka | Martech Zone
Shaki kuma jiro in hagaajinta bogagga soo degitaanku yahay dadaal qiimo leh oo ku saabsan suuqgee kasta. Emailka 'Monks' ayaa tan soo ururiyey tan dhammaystiran oo is-dhexgal ah Talooyinka ku habboonaanta bogga soo degitaanka ee keena natiijooyinka la qiyaasi karo. Waa kuwan tirooyin waaweyn oo laxiriira degsiimada bogga soo degsashada.
Madaxweyne Barrack Obama wuxuu aruuriyay $ 60 milyan oo dheeri ah isagoo kaashanaya baaritaanka A / B
Bogagga dhaadheer ee dhaadheer waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan illaa 220% hoggaamiyeyaal ka badan inta ka sarreysa laab-ka-ficil-celinta
48% suuqleyda ayaa dhisaya bog cusub oo degitaan loogu talagalay olole kasta oo suuq-geyn ah
Shirkadaha waxay diiwaangeliyeen koror ah 55% hoggaankooda ka dib markii ay kordhiyeen bogagga degitaanka ee laga bilaabo 10-15
Imtixaanka A / B wuxuu cadeeyay inuu yahay habka ugu caansan ee lagu hagaajinayo heerka beddelka
Gmail mar ay tijaabisay 50 midab oo kala duwan oo midabka buluuga ah ah si loo helo hal har oo loogu talagalay CTA-kooda taas oo badashay ugu badnaan
Cilmi-baarista ay dhameystireen waxay bixisaa liis dhamaystiran oo ah talooyinka ku habboon hagaajinta bogga:
Dadka - cadee shakhsiyaadka bartilmaameedkaaga bartilmaameed oo si gaar ah ula hadal.
Focus - hal diirad saar bogga soo degitaanka oo ka saar wixii macluumaad ah ee aan khuseyn.
Madaxa - Saddexda ilbiriqsi ee ugu horreysa waxay ka tirsan yihiin cinwaanka bogga wuxuuna noqon doonaa darawal koowaad oo ah haddii booqdeyaashu sii joogayaan iyo in kale.
Nuqul ku hawlan - Khad kasta oo nuqul ah waa inuu bixiyaa qiime oo u kaxeeyaa sheekada guriga taasoo soo jiidan doonta beddelaad.
Wax-U-Yeedid - Samee CTA cad oo soo jiidasho leh isla markaana dhalisa beddelaad.
jihada - U sheeg jihada martida si ay ugu dhex maraan beddelaad. U sheeg goorta, sida iyo waxa laga filayo.
la barbardhigo - Samee CTA-gaaga inuu ka soo baxo bogga intiisa kale sidaa darteed waxaa si cad ugu cad soo booqdahaaga booqashada waxa ku xiga ee la sameynayo.
Markhaatiyadayada - Bixi arrimo aamin ah sida marqaatiyada si kor loogu qaado heerkaaga beddelka.
Goobaha - Bog mashquul ah oo leh waxyaabo mashquuliya ayaa lumin kara diiradda dadka ku soo booqda. Waxyaabaha furfuran oo fudud.
Color - Midabbada ayaa kiciya jawaab dareen ah. Hubso inaad baarto midabadaada oo aad ugu dhigto qofka iyo dhaqanka aad isku dayeyso inaad codsato.
videos - Tijaabi fiidiyowyada boggaga degitaankaaga si aad u kordhiso sicirka beddelaadda.
Soo jeedinta gaarka ah ee iibinta - Kala sooc naftaada tartamayaashaada oo qeex faa iidooyinka ku-beddelashada ee martidaada.
Cunsurka Isdhexgalka - Tijaabi popup ama waxqabad kale bogga oo dhalin kara xiisaha oo kordhin kara beddelaad.
Wada-shaydeynta - Kordhi kalsoonidaada adoo keenaya macmiil ama sumcadda lammaanaha oo laga yaabo inay aqoonsan karaan guuleystayaashaadu.
Imtixaanka A / B - tijaabi nooc kasta oo ka mid ah boggaaga degitaanka si aad u ogaato saameynta ugu badan iyo sicirka beddelka.
Kala-goynta - sameyso kala duwanaansho boggaaga degitaanka ee lagu bartilmaameedsanayo kanaalada bartilmaameedka kala duwan.
Caqabadahaas oo dhan waxay hoos ugu sii dhacayaan xaqiiqda ah in bogga degitaankaagu uu yahay mid rafcaan iyo mashquul ku ah adeegsadaha inuu dib u joogo oo uu sameeyo tallaabada loo baahan yahay. Ma jiro waddo gaaban oo lagu gaaro guusha ganacsiga ee ugu habboon. Waa waddo dheer oo halkaas ka baxsan, laakiin dhammaantood waxay ku bilaabmaan sida rajadaadu ay kula macaamilayso oo aad jeceshahay inay kula xiriirto. Bogga soo degitaanku waa isha ugu fiican ee tan lagu ogaan karo.
Tags: imtixaanka abwac talaabomidabkactaXoogga saarpage degteysumadda bogga degitaankabogga degista nuquldejinta bogga naqshadatilmaamaha bogga soo degitaankawaxyaabaha degida boggadiirad saarida boggacinwaanka bogga degistatilmaamaha soo-dejinta boggakala degida boggaImtixaanka bogga soo degayaHagaajintatalooyin ku habboonayntacilmi baaris shaqsiyeeddadkahal diiradmarqaatiyaalsoo jeedinta iibinta gaar ahisticmaalvideos